G9 18-40W Halogen Bulbs oven Oriọna RoHS OA oven steamer Bulbs - China Haimen Xinrong Electric
E14 X555-54 elu okpomọkụ Nguzogide oven Oriọna Ho ...
G9 WGB-A oven steamer Oriọna njide OA T300 High Tempe ...
E14 15W incandescent Bulbs oven Oriọna RoHS OA 110-130 ...
G9 18-40W Halogen Bulbs oven Oriọna RoHS OA oven Stea ...
E14 18-40W Halogen Bulbs oven steamer Oriọna T300 High ...
G9 18-40W Halogen Bulbs oven Oriọna RoHS OA oven steamer Bulbs
Halogen oven bọlbụ na-emepụta site Haimen Xinrong Electric Co., Ltd.Our bọlbụ factory ike na 1999, na ihe niile anyị na ngwaahịa ime na mba quality.This ụdị E14 halogen oven bọlb bụ kacha halogen ọdịnaya n'ihi na elu okpomọkụ, na anyị na-eji dị gluu, elu-okpomọkụ resustant tin ịgbado ọkụ na ndị ọzọ na elu-okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ihe na aghụghọ na-ekwe nkwa E14 halogen oven bọlbụ rue Whirlpool Kwes gburugburu ule na 300 ℃ elu okpomọkụ ọnọdụ. Halogen bọlbụ 1. ...
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: D / A, D / P, T / T
Halogen oven bọlbụ na-emepụta site Haimen Xinrong Electric Co., Ltd.Our bọlbụ factory ike na 1999, na ihe niile anyị na ngwaahịa ime na mba quality.This ụdị E14 halogen oven bọlb bụ kacha halogen ọdịnaya n'ihi na elu okpomọkụ, na anyị na-eji dị gluu, elu-okpomọkụ resustant tin ịgbado ọkụ na ndị ọzọ na elu-okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ihe na aghụghọ na-ekwe nkwa E14 halogen oven bọlbụ rue Whirlpool Kwes gburugburu ule na 300 ℃ elu okpomọkụ ọnọdụ.
1. kacha Halogen ọdịnaya n'ihi na elu okpomọkụ.
2. n'obi waya maka pụrụ ịdabere na kọntaktị na elu okpomọkụ.
3. Adabara pyrolysis (ime Ihere okpomọkụ 300 ° C).
4. Nkezi ndụ: 2,000 h
Welcome ịzụta ma ọ bụ na n'ùkwù elu àgwà na inogide Buy G9 oriọna njide mere na China anyị factory. Xinrong Electric bụ otu nke na-eduga ndị dị otú ahụ na-emepụta na suppliers na China. Na ahaziri ọrụ na free sample ndị dịnụ.
Previous: E14 18-40W Halogen Bulbs oven steamer Oriọna T300 elu okpomọkụ na-emegide
Next: E14 15W incandescent Bulbs oven Oriọna RoHS OA 110-130V 220-240V
1. The akụkụ na-kpọkọtara na-emepụta site na ụlọ ọrụ, n'ihi ya, ọ bụ ihe kasị mma na-achịkwa ma na-eri na àgwà;
2. Complete ụlọ ọrụ usoro, zuru okè ulo oru usoro;
3. Anyị na-nwetara na-enye ngwaahịa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ;
4. Complete akwụkwọ iji hụ na ngwaahịa mma;
5. zuru okè mgbe - ahịa ozi ahịa afọ ojuju.
Haimen Xinrong Electric Co., Ltd ike na 1999, a ọkachamara emeputa pụrụ iche na nnyocha, mmepe na mmepụta nke oven oriọna njide.
Anyị na-enye iche iche iche iche nke oven oriọna njide, anyị oven bọlbụ njide-na-eji maka gas oven, dị ọcha uzuoku oven, uzuoku oven, oven ọkụ fixtures.
Welcome ịzụta ma ọ bụ na n'ùkwù elu àgwà na inogide ịzụta oven oriọna njide mere na China anyị factory. Xinrong Electric bụ otu nke na-eduga ndị dị otú ahụ na-emepụta na suppliers na China. Na ahaziri ọrụ na free sample ndị dịnụ.
15w 25w T22 oven bọlbụ Iji N'ihi Salt Oriọna
15w E14 oven bọlbụ
240v 50hz oven oriọna
300 Degree oven bọlbụ
anọte Aka Halogen oven oriọna
E14 Salt oriọna Oven bọlbụ
E14 Salt oriọna oven bọlbụ T22 230v 25w
Easy Ime oven bọlb
Electrolux oven Halogen bọlb
okpomọkụ Risistant Bulbs maka oven
elu okpomọkụ incandescent Light Bulbs
Ezinaụlọ oven oriọna
incandescent bọlbụ Oriọna njide Fittings
Microwave oven bọlbụ T22 oven bọlbụ
oven Galss N'ihi Light
oven Oriọna Parts
oven Oriọna Socket
oven Oriọna Socket N'ihi Sale
oven Light Base
oven Light Base N'ihi Sale
oven bọlb N'ihi Sale
oven Light Cover N'ihi Sale
oven Light oven bọlbụ Ewepụghị Head Oriọna E14 njide
oven Parts Galss Light N'ihi Sale
oven Parts bọlb
poselin oven oriọna
Quality Efere oven bọlbụ njide
akụkụ anọ oven oriọna
akụkụ anọ oven Oriọna N'ihi Sale
Nnọchi oven bọlbụ
Nnọchi oven oriọna
steamer Oriọna N'ihi Sale
tosta oven oriọna
ebe ịzụta oven bọlb
N'ogbe E14 oven Oriọna
N'ogbe E27 oven Oriọna
N'ogbe G9 oven Oriọna
N'ogbe oven bulbs
N'ogbe oven oriọna
N'ogbe oven oriọna Cover
N'ogbe oven bọlb
E14 18-40W Halogen Bulbs oven steamer Oriọna T300 ...